3190 Tropical North Queensland mabasa ekushanya acharasika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » 3190 Tropical North Queensland mabasa ekushanya acharasika
Australia Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Unganidza nemasikirwo munzvimbo isina kufanana nechero kupi - kwakapeteredzwa nedombo uye rakafukidzwa nesango remvura, kugamuchirwa kunotonhora pasi rose kwakakumirira.
Uyu ndiwo meseji paTropical North Queensland Tourism Board webhusaiti, ichisimudzira yakakurumbira Great Barrier Reef neCairns muAustralia.
Imwe 3,150 Tropical North Queensland mabasa ekushanya muAustralia acharasika neKisimusi ichideredza vashandi vekushanya kusvika pahafu yehukuru hwepre-denda, sekutsvagurudza kutsva kubva ku Tourism and Transport Forum (TTF).
Tourism Tropical North Queensland (TTNQ) Chief Executive Officer vaMark Olsen vakati kushanya kwakashandisa vashandi vanosvika zviuru gumi neshanu nemazana manomwe nemakumi mashanu uye, nekushambadzira zvisina kunanga, vakatsigira mabasa anosvika mazana maviri nemakumi mashanu nemashanu pamberi pehosha mudunhu reCairns.
Pakazosvika Chikunguru 2021, takanga tarasikirwa nevashandi vanosvika zviuru mazana matatu nemazana matanhatu, kunyangwe nerutsigiro rweJobKeeper uye musika wekudzoka mudzimba, "vakadaro VaOlsen.
“Dunhu iri rakakura nevashandi vakagadzirira nguva yechando, asi zvino vatsva ava, vanosanganisira vanopfuura mazana maviri kubva kubazi rezvekushanyirwa, vanga vachidzidziswa kwemwedzi vari kuudzwa kuti vatsvage rimwe basa.
"Hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti izvi zvichabatsira sei munharaunda medu umo basa rimwe pamashanu rakatsamira pakushanya."
Sachigaro weTTNQ, Ken Chapman akati rutsigiro rwemari rwaidiwa kuvashandi vekushanya vari kurasikirwa nehupenyu hwavo izvozvi.
Teerera kuhurukuro kubva kuNorth Queensland
"Vashandi vakamira pasi uye vakarasikirwa nemaawa ebasa nekuda kwekukiyiwa munzvimbo yavo vanokwanisa kukwira kusvika pamadhora mazana manomwe nemakumi masere pasvondo yeCovid njodzi yemubhadharo kubva kuCentrelink," akadaro.
“Asi vashandi vezvekushanya vakamira nekuti kukiyiwa kumwe kunhu munyika kuri kukonzera kuti bhizinesi revashandirwi rikiyirwe kunze kubva kune vatengi vacho havagone kuwana rutsigiro rwemari.
"Iyi idambudziko revanhu rakakonzerwa nemutemo weHurumende."
Cairns Chamber of Commerce CEO Patricia O'Neill akati kurasikirwa kwemabasa kuri kunzwika mumaindasitiri ese, kunyanya vezvitoro izvo zvakatambura ne 61% kudzikira mumabasa kubvira gore remari rapfuura.
Advance Cairns CEO Paul Sparshott akati kugona kwehupfumi hwedunhu kudzoka kuchadzikira zvakanyanya kana vashandi vane hunyanzvi vakarasikirwa nebazi rezvekushanya nekugamuchira vaeni.
“Kuchave nekugadziriswa kukuru. Kana misika yezvekushanya ikakanganiswa zvakanyanya inoyerera ichienda kune mamwe maindasitiri anokanganisa hupfumi hwese hwedunhu, ”vakadaro.
Mr. Olsen vakadaro Tropical North Queensland is uye icharamba iri, imwe yenzvimbo dzakakanganiswa muAustralia, uye tarisiro yeindasitiri yekushanya yaive yakaipa.
“Pasina vatengi, mabhizinesi haana mari yekuchengetedza vashandi vavo vane hunyanzvi, vamwe vacho vakagamuchira makore ekudzidziswa munzvimbo dzakasarudzika kuti vave vateki, vatyairi vemabhiza, uye vanomhanyisa izvo zvinopa siginicha yezviitiko mudunhu.
“Dunhu redu rave nemazuva makumi maviri nemanomwe ratwasuka pasina kukanganiswa nekukiyiwa mumisika yemuno mumwedzi gumi nesere yapfuura.
“Nguva iyoyo muna Chivabvu ndiyo yaive yakanyanya kubatikana munzvimbo yeCairns neGreat Barrier Reef kubva nenjodzi iyi isati yavepo sezvo tiri nzvimbo yeGoogled yenharaunda yevashanyi vemuAustralia.
"Zvisinei, kumira / kutanga kwekukiya kwekumaodzanyemba kwakakomberedza kuenda kumisika yakakosha kunonetsa kumabhizimusi kubata, kunyanya nevashandi.
"Tiri muvhiki yedu yechitanhatu yevashanyi vanodonha vakasununguka vanopfuura mamirioni gumi nevaAustralia vari kukiya.
“Mabhizimusi mazhinji ari kuita isingasvike zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari dzaanowana, uye kumberi kubhuka kuri kudzikira nemahotera kudzika kusvika pa5-15% yekugara uye inodarika $ 25 miriyoni muzviitiko zvakamisikidzwa muna Chikunguru naNyamavhuvhu.
"Tine zvikepe zvichibuda nevatasvi vatanhatu chete andvashandi vana uye nzvimbo zhinji dziri pamaawa mashoma ekutengesa, nepo vamwe vapinda muhope.
"Vatengi varasa chivimbo chekubvakacha nzvimbo dziri pakati nepakati nekumba, pamwe vangangoita 60% yevafambi veAustralia vasingakwanise kuyambuka muganho weHurumende maererano nedata nyowani kubva kuQueensland Tourism Industry Council (QTIC)."
“Nehafu yerwendo rwedu rwemumba ichibva kunzvimbo dziri kure isati yavharirwa, kuvhara miganhu kucharamba kuchikanganisa nharaunda yedu.
“Nemazororo ezvekuchikoro ave pedyo, basa rekushambadzira reTTNQ munaGunyana naGumiguru rinenge richinyanya kuvimba nevashandi vevashanyi kuti vaedze kupa vatengi chivimbo chekubhuka vachiziva kuti shanduko icharamba ichiitika.
"Mashoko kubva kumasangano ezvitoro anoratidza kuti Cairns inoramba iri nzvimbo yechishanu yakatsvakwa zvakanyanya uye yechitanhatu yakanyoreswa mafambiro ekufamba mumavhiki mana apfuura, asi isu tiri kumhanya pane isingasvike 25% yekusecha uye 55% yemabhuku kubva kwatakange tiri- Covid."
IATA: US kuvhurazve kune vafambi vafambi ...
Ford Motor Company inokudza BorgWarner nenyika ...
North Queensland Tourism kurasikirwa kwemabasa kuti kuwedzere ne ...
Russia inogumisa zvirango kuAustria, Switzerland ...
Mushure memakumi maviri emakore eFBI Investigation iri ...
Vatakuri paFully-Vaccinated Royal Caribbean Cruise ...
Moscow Sheremetyevo Inotumidzwa Inonyanya Kufarira Airport mu ...
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwakakunda nzvimbo yeTokyo, kwete ...
Gulf Air inotangazve ndege kubva kuBahrain kuenda kuMoscow ...
Ndiani mutsva weSanta Lucia Gurukota rezveKushanya?
Universal Beijing Resort yakavhurika kune veruzhinji nhasi
SATW Foundation inozivisa 2021 vanokunda Lowell ...
US Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kurwira dutu reHurri
2022 yekufamba hacks: Yakanakisa nguva yekuverenga ndege uye mahotera
Kuvhiringidzika pamusoro pezvitupa zvekudzivirira zvinodzivirira kufamba ...
Laos Inowedzera Nyika Yese Kukiya Kusvika Nyamavhuvhu 18
Donald Wright ndiani, iyo VP nyowani yeAlaska Airlines?
Vanhu 4 vakaurayiwa mutsaona yendege yeConnecticut
Airbus inonunura yekutanga A220 jeti kuAir France
Kutengeswa kweSamsung smartphones kwakarambidzwa muRussia
Texas inovhara pasi muganho wekuyambuka mapoinzi kuti imire ...
COVID-19 yekupfuura hutano ikozvino inosungirwa muItaly
Jamaica Tourism Gurukota Inotungamira kuPortugal ye ...
Wepamusoro gumi ekufamba kwenzvimbo kune vafambi vega gore rino
Radisson Hotel Boka: Kumadokero neCentral Africa ...
Vanhu: Usashandise mhuka inouraya honye mushonga we ...
65% yevafambi vendege vekuUS vanotsigira mapasipoti ekudzivirira
Airbus Passenger Plane kutendeuka kuva Freighters: Iyo ...
Princess Cruises Emerald Chikepe Kudzokera Kumakungwa Makuru
Iwo maCanary Islands 'akachengeteka' anodaro ...
Meal Kit Indasitiri Inokwira muMabhirioni
Mauritius inogumisa kupatsanurwa kwevatashanyi vakasungwa ne ...
Michael Jackson, Mambo wePop Las Vegas zuva rekuzvarwa ...
Seychelles Inogamuchira Kufamba Girazi Chiedza Zvino kubva kuItari
Ngozi dzeMafoni, Makomputa & Tekinoroji ...
IMEX Inotungamira Nzira Pamisangano yeEuropean uye ...